Izakha mzimba azifumaneki kwimifuno nakwiziqhamo Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Ukutya kwemifuno kunye ne-vegan kunokuba sempilweni kakhulu kwaye kunxulunyaniswa ngokubanzi nomngcipheko osezantsi wokutyeba kakhulu, isifo sentliziyo, kunye neentlobo ezithile zomhlaza.
Nangona kunjalo, kukho izondlo ezithile ezingenakulindeleka ukuba zifumaneke kwixabiso elaneleyo kwizityalo (imifuno, imifuno, amagqabi, kunye neziqhamo). Ke ngoko, kubalulekile ukuthathela ingqalelo imfuno yezongezo, ukuze kungabikho bungozi bokungondleki kunye nezinye iingxaki ezinokubakho empilweni.
Kuqikelelwa ukuba izakha-mzimba ezisixhenxe zihlala zingekho kwizidlo zemifuno kunye nemifuno ekungekho zisongezo zisetyenziswayo. Zezi:
ICobalamin, eyaziwa njenge-B12, ithintela isifo sentliziyo kunye nokubetha. Ukongeza, kubalulekile kakhulu ukuba ulondolozo elungileyo luvo. Xa isilela emzimbeni, umntu unokuziva ediniwe kwaye ebuthathaka.
I-Creatine yinkomfa yee-amino acid ezikhoyo kwimicu yemisipha nakwingqondo. Igcinwe ngokubanzi kwimisipha kwaye ikwafumaneka ngobuninzi bayo kwingqondo. Isebenza ikakhulu njengendawo yokugcina amandla, yokukhuthaza amandla kunye nokumelana. I-Creatine ayibalulekanga, oko kukuthi, ayixhomekeki ekungeniseni kwaye inokuveliswa ngumzimba womntu, ngakumbi esibindini.
ICarnosine yidipeptide equlathe ii-amino acid beta-alanine kunye ne-histidine ezifumaneka ikakhulu kwizihlunu zemisipha. Izifundo zibonise ukuba ukwanda kwamanqanaba e-carnosine emzimbeni kunceda ukuphucula ukusebenza komzimba, okubalulekileyo kubadlali, umzekelo. Ukongeza, ine-antioxidant function emzimbeni kwaye iyanceda ekunyangeni.
I-Vitamin D3 yenye yeentlobo zevithamini D kwaye isebenza emzimbeni kunye nevithamini D2. Owona msebenzi uphambili emzimbeni kukulungiselela ukufunxwa kwe calcium, ebaluleke kakhulu kuphuhliso olusempilweni lwamathambo namazinyo. Ukongeza ekuphuculeni impilo yethambo, ivithamin D ithintela izifo ezinje ngokutyeba kunye neswekile.
I-DHA yenye ye-omega-3 fatty acids kwaye isebenza ukunqanda ukonakala kwesibindi, okunokubangelwa kukutya okungalunganga kunye nokungondleki. Ukusilela kwayo kunokuba yingozi kwingqondo nasekusebenzeni kwenkqubo yemithambo-luvo.
Intsimbi yenye yezona zinto zibalulekileyo emzimbeni wethu. Liyinxalenye ebalulekileyo yehemoglobin, umbala obomvu wegazi othwala ioksijini ukuya kwiiseli kwaye ususe ikharbon diokside kuzo, oko kukuthi, ithatha inxaxheba kwimveliso kunye nokukhululwa kwamandla emzimbeni. Ukongeza, ikwasebenza ngokudibanisa iimolekyuli ezibalulekileyo zezinto eziphilayo.
I-Taurine yi "amino-ebalulekile" i-amino acid kwaye ifumaneka ngobuninzi kwimizimba yethu, umzekelo kwingqondo, entliziyweni nasezintso. Isebenza kwimisipha njengesihambisi somzimba kwaye yomeleza ukucaphuka kwentliziyo.